युरोपियन युनियन प्राविधिक टोलीको बैठकमा नेपाललाई पनि निमन्त्रणा – Youth Awaaj
विनाविभागीय बनेको ८६ दिनपछि राजीनामा दिँदै माओवादी मन्त्री
अब किताब हेरेरै परीक्षा दिन पाइने !
‘इन्टरनेट ब्याण्डविथ’ मा भारतको एकाधिकार अन्त्य
युरोपियन युनियन प्राविधिक टोलीको बैठकमा नेपाललाई पनि निमन्त्रणा
January 12, 2018 Mayank Ghimire0Comments
काठमाडौं, २8 पुस: आगामी १९-२१ जनवरीमा युरोपियन युनियनको प्राविधिक टोलीको बैठक बस्दैछ । र, उक्त बैठकमा नेपाललाई पनि आमन्त्रण गरिएको छ । नेपालको उड्डयन क्षेत्रमा भएको प्रगति र अहिलेको अवस्थाबारे ईयूलाई जानकारी गराउने उद्देश्यले एक टोली बेल्जियमको ब्रसेल्स जाने तयारीमा छ ।
गत मंसिरमा बसेको ईयूको बैठकले तत्काल नेपाललाई कालोसूचीमै कायम राख्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त बैठकले नेपाललाई आफ्नो उड्डयन क्षेत्रमा भएका प्रगति पेश गर्न लगाउने पनि निर्णय गरेको थियो । सोहीअनुसार नेपाललाई अहिले प्राविधिक टोलीको बैठकमा सहभागी गराउन लागिएको हो ।
प्राधिकरणका हवाई सुरक्षा विभाग प्रमुख राजन पोखरेलका अनुसार महानिर्देशक सञ्जीव गौतमसहितको एक टोली ब्रसेल्स बैठकमा भाग लिन जाने तयारीमा छ ।
‘हामीले आफ्नो अवस्थाबारे ब्रसेल्समा जानकारी गराउने छौं,’ पोखरेलले भने, ‘अघिल्लो बैठकमा हामीलाई बोलाएको थिएन, अबको बैठकमा हामीले दिएको रिपोर्ट पेश गरिनेछ ।’
पोखरेलका अनुसार खासगरी नेपालमा हुने जहाज दुर्घटना र नियमनकारी निकायको अनुगमनमा ईयूको चासो बढी छ । हवाई क्षेत्रमा भएको कमजोर भौतिक संरचना र फितलो कानुनका कारण पनि ईयूले नेपाललाई कालोसूचीबाट हटाउन मानेको छैन ।
नेपालमा हवाई सुरक्षा चार वर्षअघिकै अवस्थामा रहेको निष्कर्ष ईयूको रहँदै आएको छ ।
नेपालका जहाज कम्पनीहरुलाई युरोपका २८ वटा देशको आकाशमा उड्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले उडान अनुमति पत्र -एओसी) जारी गरेका सबै जहाज कम्पनीलाई ईयूले कालोसूचीमा राखेको छ । नेपालमा एओसी पनि सही ढंगबाट वितरण नहुने ईयूको बुझाइ छ ।
सन् २०१३ मा कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गर्दा नेपालबाट प्रतिनिधि बोलाएको थियो । त्यसलाई कायम राख्ने निर्णय लिइएको गत नोभेम्बरको बैठकमा नेपाललाई बोलाएको थिएन । अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन -आईकाओ)को गम्भीर सुरक्षा चासो (एसएससी)बाट भने नेपाल गत ६ साउनमै हटिसकेको छ ।
आईकाओको एसएससीकै आधारमा ईयूले पनि नेपाललाई कालोसूचीमा राखेको थियो । अहिले भने ईयूले आईकाओले कालोसूचीबाट हटाएकै भरमा नेपालका जहाज कम्पनीलाई उक्त सूचीबाट हटाएको छैन ।
नेपालले पेश गरेको प्रगति विवरणप्रति गत नोभेम्बरको बैठकमा ईयूले चित्त बुझाएको थिए ।
ईयू र आईकाओ दुवैले लामो समयदेखि नेपाललाई स्वतन्त्र हवाई दुर्घटना निकाय गठन गर्न भनिरहेका छन् । तर, त्यस्तो निकाय अहिलेसम्म गठन हुन सकेको छैन । हवाई दुर्घटना भएसँगै विभिन्न समिति बनाएर अध्ययन गरिन्छ । तर, उक्त रिपोर्टले दिएको सुझावलाई कार्यान्वयन नगर्ने गरिएको ईयूको बुझाइ छ ।
यस्तै, कमजोर भौतिक संरचना भए पनि प्राधिकरणले नयाँ जहाज कम्पनीहरुलाई उडान अनुमति दिन छाडेको छैन । र, प्राधिकरणमा निजी जहाज कम्पनीको दबदबा हुने ईयूको बुझाइ छ ।
← निर्माण सुरु भएको १० वर्षपछि चमेलियामा ‘वेट टेस्ट’
‘इन्टरनेट ब्याण्डविथ’ मा भारतको एकाधिकार अन्त्य →
गोरखामा बाबुरामले हार्दैछन्: वर्षमान पुन
महानगरलाई ९ करोड कर नतिरेको अन्सारी एमालेबाट महानगरपालिकामा मेयर उम्मेदवार
केन्द्र र स्थानीय तहवीच कर विवादः काठमाडौंबासीलाई दोहोरो करको मार
विनाविभागीय बनेको ८६ दिनपछि राजीनामा दिँदै माओवादी मन्त्री January 12, 2018
१० वर्षमा ४० हजार मेगावाटको लक्ष्य January 12, 2018
अब किताब हेरेरै परीक्षा दिन पाइने ! January 12, 2018
‘इन्टरनेट ब्याण्डविथ’ मा भारतको एकाधिकार अन्त्य January 12, 2018
युरोपियन युनियन प्राविधिक टोलीको बैठकमा नेपाललाई पनि निमन्त्रणा January 12, 2018
+977 – 9849154797
Copyright © 2018 Youth Awaaj. All rights reserved.